Cali Dheere “Waa u aargudeynaa dadkii Muslimiinta ahaa eelagu xasuuqay Boosaaso” – idalenews.com
fhayeenka guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa ku goodiyay inay u aar-gudi doonaan ilaa 13-ruux oo mid ay haweeney aheyd, kuwaasoo shalay Ciidamada Puntland ku dileen duleedka Boosaaso, kadib markii ay Maxkamad xukuntay.
Cali Dheere ayaa sheegaya in wax ka dhacay Boosaaso uu ahaa fal aad u fool xun oo aan ka dhicin wadamada Islaamka, isagoo tilmaamay in dadkii la dilay aanay wax shaqo ah ku laheyn waxa lagu eedeeyay.
“Waxa ka dhacay Boosaaso waa dhacdo aanan ka dhicin wadamada Muslimiinta ee xorta ah balse waa dhacdo inta badan ka dhacda dalalka Muslimiinta ah ee ay gaalada iyo gaalaraacyadu xooga ku haystaan”ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Waxaa uu sheegay inay u aar-gudayaan dadkii lagu xasuuqay Puntland, isagoo xusay in intii gacan ka geysatay falkaas ay ugaarsan doonaan sida uu yiri.
“Xasuuqii ka dhacay Boosaaso wuxuu ahaa fal aad u fool xun, waana in loo aargudaa Muslimiinta la Xasuuqay, kii xukumay, ama marqaati ahaa, ama fulisay ama soo jaajuustay, intaba”ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
“Maamulkaas ashahaado la dirirka ee Puntland Muslimiinta uu xasuuqay, mujaahidiinta waxay ka qaadan doonaan kaalintooda”ayuu ku sii daray hadalkiisa.
Ugu dambeyn Cali Dheere ayaa sheegay in dad badan oo Muslimiin xabsiyada lagu haayo, isagoo ugu baaqay shacabka reer Puntland inay ka kacdoomaan dhibaatooyinka lagu haayo.